kubadaha weelalka duulaya Warshad - Shiinaha oo duulaya kubadaha suugada Soosaarayaasha, Alaab-qeybiyeyaal
kubadaha birta qaada
kubadaha birta ah ee birta ah
Kubadaha birta kaarboon
kubadaha suugada duulaya
kubadaha naxaasta ah
kubadaha la qoday
440 / 440C kubadaha birta ahama
420 / 420C kubad bir birta ah
304 / 304HC Kubadaha biraha ahama
Kubadaha ZrO2 dhoobada
Si3N4 kubbadaha dhoobada ah
Kubadaha naxaasta / Kubadaha Copper
Saxanka duulaya / Kubadaha birta shiidi kara
AISI52100 Kubbadaha birta ah ee qaadista / chrome
1.Tilmaamaha alaabta: kubadaha wax lagu nadiifiyo ee wax lagu nadiifiyo ayaa inta badan laga sameeyaa bir bir ah oo tayo sare leh ama silig bir ah oo kaarboon ah ka dib cilad qabow oo ku dhalaasho qaab suugada duulaya, sidaa darteed waxaa loo yaqaan kubbadda saxanka duulaya. Gobolka muraayadda.
2.Meelaha arjiga:Kubadda duulaya, oo umuuqata suugada duulaysa ama saxanka UFO, ayaa si ballaaran loogu isticmaalaa qalabka lied Waxaa loo adeegsadaa qaybaha biraha aan birta ahayn ee birta biraha ah, qaybaha naxaasta ah, aluminium ka sameysan iyo waxyaabo kale, sida qaybo been abuur ah, qaybaha mashiinka, iwm. Burburinta, biligleynta, wareejinta, hoos u dhigida, ka saarida miridhku, xoojinta dusha sare ee birta, dhalaalka dhalaalka iwm.
Qeexitaannada guud ee kubbadaha foornada u eg ee qaabeeya waa: 1 * 3mm, 2 * 4mm, 4 * 6mm, 5 * 7mm, 3.5 * 5.5mm, 4.5 * 7mm, 6 * 8mm, 8 * 11mm, iwm.;
Warshaddeenu waxay kaloo socodsiin kartaa oo ay habeyn kartaa noocyo kala duwan oo kubbado suugada duulaya ah iyadoo loo eegayo cabbirka ay u baahan yihiin macaamiisha, iyadoo la helayo waqti gaaban oo la gaarsiiyo, dhaqsi la geeyo, tiro badan iyo qiimo mudnaan leh.